Boqolmaayo Iyo Waftigii Heer Deegaan - Cakaara News
Boqolmaayo Iyo Waftigii Heer Deegaan
Boqolmaayo( cakaaranews )sabti 26ka March 2016, Wafti Heer deegaan ah oo kaqayb Galay xaflada dabaaldaga degmada cusub ee Boqolmaayo ee Gobalka liibaan ayaa dhagax dhigay mashaariic Hormarineed.
Hadaba, Waftigan ayaa waxaa Hogaaminayey Wasiirka Xafiiska Kahortaga iyo Udiyaargarowga Masiibooyinka DDSI mudane Maxamed Daahir, ayaa waxaana socdaalka kuwahelinayey xubno sar sare oo ay kamid ahaayeen wasiirka xafiiska xidhiidhka arrimaha Dawlada Dhaqanka iyo Dalxiiska ee DDSI Eng.idiris ismaaciil cabdi, wasiirka xuduudaha DDSI,Gudoomiyaha Gobalka liibaan iyo Hogaamin kale.
Sidaasdarteed degmadan cusub ee boqolmaayo oo loosamayay xafald heersare ah ayaa waxaa ugu horayn lagufuray aayadaha quraanka kariimka ah kadibna waxaa qudbad dhinacyo badan taabanaysa kasoojeediyay Wasiirka Xafiiska Kahortaga iyo U diyaargarow Masiibooyinka DDSI mudane Maxamed Daahir, oo sheegay in kasooqaybgalka degmadan cusub ee boqolmaayo uu aad ugu faraxsanayahay isagoo aadna ugu mahadceliyay sida quruxda badan ee farxadu ku dheehantahay ee ay bulshada ree boqolmaayo u soo dhawaysay. Sidookale wasiirka ayaa tilmaamay hormarka balaadhan ee deegaanka ka hanaqaaday shantii sano ee udanabaysay iyo waliba sida uu xawliga ugu socdo horumarka DDSI.
Wasiirka oo hadalkiisii siiwata ayaa xusay in degmadani ay kutaalo meel aad u fiican oo dalsan ah islamarkaana ku haboon wax soosaarka. Ugudanabayna wuxuu masuulku ku booriyay bulshda boqolmaayo inay degmada cusub ay maalgashadaan.
Dhanka kale, wasiirka xafiiska kahortaga iyo u diyaargarow masiibooyinka DDSI mudane Maxamed Daahir iyo Wasiirka Xafiiska Xidhiidhka Arrimaha Dawlada Dhaqanka iyo Dalxiiska ee DDSI Eng.idiris ismaaciil cabdi ayaa dhagax dhigay dhismaha Mashaariic Horumarineed oo ay kamid yhiin iskuulo iyo caafimaad.
Ugudanabayntii waxaa iyaguna dhinacooda kahadlay Gudoomiyaha Gobalka liibaan, cuqaasha , waxgaradka, haweenka iyo dhalinyada oo ka hadlay dareenkooda ku aadan xaflada degmada cusub iyo waliba dhagax dhiga mashaariicaha cusub ee lasamaynayo.